Equator Oganda: Iray amin'ireo mari-toerana malaza mpizahatany eto amin'ny firenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Equator Oganda: Iray amin'ireo mari-toerana malaza mpizahatany eto amin'ny firenena
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao Mafana Oganda
Ny ekoatera ekoatera dia iray amin'ireo mari-toerana fanta-daza fanta-daza any Oganda. Ny elanelan'ny velaran'ny Tany sy ny fiaramanidina mifandraika amin'ny axis an'ny fihodinan'ny Tany ary misy ny afovoan-tany eto an-tany no resahin'i Wikipedia indraindray ny ekoatera, saingy io no tsipika an-tsary mampisaraka an'izao tontolo izao ho roa.
Ny Equator dia tsipika fakana sary an-tsaina izay hita eo amin'ny sari-tany manamarika ny mpitaingin-tsoavaly avy amin'ny Tendrontany Avaratra sy atsimo. Mandritra ny tsipika an-tsary an'ny ekoatera, ny fanjaitra andriamby dia tsy milentika ary miorina amin'ny toerana marindrano tanteraka. Afaka mijoro amin'ny tongotrao amin'ny hemisphere avaratra ianao ary ny iray kosa amin'ny hemisphere atsimo amin'izao fotoana izao; traikefa mahatalanjona toy izany ny mijoro amin'ny lafy roa eran'izao tontolo izao.
Miposaka ny masoandro ary milatsaka haingam-pandeha any amin'ny ekoatera, miaraka amin'ny halavan'ny andro sy alina '. Ny olona manodidina ny ekoatera dia tsy mahita afa-tsy ny hafanana mafana sy ny toetr'andro tropikaly mandritra ny taona ary, noho izany, sarotra be ny manavaka ny vanim-potoana.